ORINASA AMBATOVY : Mandray anjara amin’ny fanarenana ny faritra avy notrandrahina
Miroso hatrany araka izay voarakitra ao anatin’ny bokin’andraikitra mifehy an’Ambatovy, ny fanarenana mitandro ny tontolo iainana ny toeram-pitrandrahany ao Moramanga. 12 avril 2019
Mitondra ny anjara birikiny amin’izany avokoa ny rehetra. Nifampitaona tao amin’ny faritra iray anaovana izany fanarenana izany ny mpiasan’Ambatovy ny 7 marsa 2019, mba hamboly zanakazo ala zanatany 2 500 mahery toy ny harongana, ditimena, voamboana, varongy, afotra, vakoka … Efa lasa fomba fanao eo anivon’ny orinasa Ambatovy isan-taona ity fiaraha-mientan’ny mpiasa ity, ka ny asa fikolokoloana sy fanatevenana ny toerana nambolen-kazo tamin’ny taona 2018 no notanterahina tamin’ity taona ity. « Andao hiaraka hamboly hazo ho an’ny taranaka ho avy » ny lohahevitra nitondrana ny hetsika.
Marihina fa efa an-taonany maro izao no nanombohan’ity asa fanarenana ny toeram-pitrandrahana ity ka isan’izany ny famokarana zanakazo, ny andrana natao nanomboka ny taona 2010, ny fanajariana ny tany, ary mitohy isan’andro mandritra ny taona izany amin’ny alalan’ny asa fikojakojana sy fanaraha-maso ny zavamaniry novolena. Dingana iray lehibe no vita tamin’ity taona 2019 ity taorian’ny namindrana tao amin’ny toerana anaovana fanarenana ireo zavamaniry tandindomin-doza, tsy hita raha tsy any an-toerana ary arovan’ireo lalàna iraisam-pirenena hentitra, antsoina hoe : « Species Of Concern » (SOC).
Manohana ireo tetikasa famoronana asa ho an’ny tanora
Ankoatra io asa fanarenana io, dia manohy hatrany ny fanohanany ireo tetikasa famoronana asa ho an’ny tanora ao anatin’ny faritra manodidina ny toeram-pitrandrahany ao Moramanga ny orinasa Ambatovy. Tanora enina tsy an’asa any an-toerana izay mivondrona ao anatin’ny fikambanam-behivavy Mitia no afaka nanangana tetikasa fiompiana akoho manatody lava ary efa mamatsy atody eny amin’ny manodidina ankehitriny, noho ny fanampiana avy amin’Ambatovy. Rehefa avy nandranto fiofanana mikasika ny fiompiana, izay notohanan’Ambatovy, tao amin’ny “Centre de Formation Agricole” (CFA), tao Ambarilava Moramanga izy ireo dia nanangana io fikambanana io ary niroso tamin’ny fitadiavana famatsiam-bola hanombohana ny tetikasa. Nanohy ny fanampiana azy ireo Ambatovy teo amin’ny lafiny teknika fananganana tetikasa sy fikarohana mpamatsy vola.
Notoloran’ny mpamatsy vola iray akoho manatody lava 42 niaraka tamin’ny sakafony tsirairay avy izy ireo ny volana nôvambra 2018 mba hanombohana ny tetikasa. Ny tranon’akoho kosa dia ireo mpikambana ao amin’ny Mitia no niantoka manontolo ny fananganana azy. “ Nihatsara tokoa ny fari-piainanay satria efa manana fidiram-bola izahay ankehitriny hampiroboroboanay hatrany ny asa fivelomanay“, hoy i Ursule Raharimbolanirintsoa, iray amin’ireo mpikambana monina ao Ampitambe, izay mamokatra atody 40 eo ho eo isan’andro ankehitriny.